DAGAALKA SUUQA: Kooxaha Ugu Waaweyn Yurub Oo Ku Dagaallamaya Adama Traore - Yaa Ku Gacan Sarreeya Illaa Hadda? - Gool24.Net
DAGAALKA SUUQA: Kooxaha Ugu Waaweyn Yurub Oo Ku Dagaallamaya Adama Traore – Yaa Ku Gacan Sarreeya Illaa Hadda?
20/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay ku biirtay dagaalka loogu jiro xiddiga kooxda Wolves ee Adama Traore oo ay ku loollamayaan kooxaha ugu waaweyn Yurub.
24 jirkan reer Spain oo xili ciyaareedkan wacdaro ka dhigay horyaalka Premier League ayaa waxa uu suuqa ka abuurayaa hirdan weyn oo kooxaha ugu waaweyn ay ku kala jiidanayaan, waxaana markii hore ku koobnaa labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City oo ay mar dambe saddexaysay Bayern Munich, laakiin dagaalka ayaa waji kale yeeshay markii uu Ole Gunnar Solskjaer go’aamiyey in kooxdiisuna aanay ka maqnaanin oo ay calafkeeda ka qaaddo.
Troare ayaa kusoo baxay laacibiinta loogu doonista badan yahay suuqa iibka, waxaanu ku mutaystay bandhiggii uu sameeyey ee difaacyahannada kooxaha Premier League u taag-waayeen kulamadii uu ciyaaray oo uu Wolves u ahaa xiddiga ugu muhiimsan.
Kulankii Liverpool ay kooxdiisa kaga hor tagtay ayuu difaaca Andy Robertson qirtay in Troare uu ku bahdilay garoonka dhexdiisa, laakiin waxa maalintaas cirka sii galay damacii uu Jurgen Klopp ku rabay inuu ka shaqeeyo sidii uu u keeni lahaa Anfield.
Laacibkan oo kasoo baxay kulliyadda da’yarta Barcelona ayuu Jurgen Klopp qaab maldahan u qiray in kooxdiisu ay u dhaqaaqayso heshiiskiisa iyadoo marka horeba ay hadal-hayn badan suuqa kusii jirtay, waxaana uu xilligaas ku tilmaamay laacib ‘aan lala ciyaari karin’ oo dhibaato laga mudanayo.
Sida uu qoray wargeyska Le10sport ee kasoo baxa waddanka Faransiiska, Manchester United ayaa noqotay kooxdii ugu dambaysay ee ku biirta tartanka loogu jiro Troare, waxaanay taasi ka dhigaysaa tirada kooxaha Ingiriiska ah ee uu bartilmaameedka u yahay saddex, halka ay Munich soo afraynayso.
Kooxda haysata horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga oo qaybtii hore ee fasal ciyaaareedkan dhibaatooyin gashay, in badanna laga hayay hoggaanka ayaa waxa lagu soo warramayaa in damaceedu yahay inay kooxaha Premier League ay ka dul-qaado xiddigan.
Heshiiska uu Traore kula jiro Wolves ayaa waxa ka hadhay saddex sannadood, hase yeeshee marka uu suuqa iibku furmo xagaagan ayaa la ogaan doonaa haddii ay kooxdiisu qiimaysan doonto oo ay qaadan doonto lacagta ay kooxahani la diyaarsan yihiin, si ay ugaga baxdo dhibaatada uu sababay fayraska Korona uu ku keenay dhaqaalaha.
Si kastaba, Liverpool ayey wararku sheegayaan inay tahay kooxda ku gacan sarraysa ee laacibkanna niyaddiisa ku jirta, waxay se wax walba ku xidhnaan doonaan dalabka loola tago Wolves.